Kabary Famangiana Manjo - Informations et Actualités sur Madagascar
Culture Kabary Famangiana Manjo
Kabary Famangiana Manjo
by Emy Team on 12 h 17 in Culture
Mpamangy: Akory avy izato ianareo, tompoko.
Vangiana: Indreto eto ihany izahay, tompoko.
Mpamangy: Avy mamangy amin’ny fahoriana, tompoko.
Vangiana: Misaotra indrindra, tompoko, ho tahian’Andriamanitra
Mpamangy: Amin’izao fahoriana midona aminareo izao ka namoizana ny hava-malala, dia tonga eto izahay, tsy iza fa ny namana sy tapakareo ihany. Ialanay tsiny, tompoko, fa misy ireo namana izay tsy tonga eto noho ny adidy aman’andraikitra maro nitana azy ireo; koa manolotra ny fialan-tsiny amin’ny anaran’izy ireo izahay. Tonga izahay tsy hamendrofendro na handatsa-dranomaso, fa tonga hitondra ny teny fampiononona, hanatanteraka ny tenin’ny Tompo manao hoe: «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany» (Rom 12: 15). Mafy tokoa izao fahoriana midona aminareo izao satria folaka andry niankinana, toro vato fandiavana ny ankohonany, ary potraka fefy mpanohan-drivotra ny fianakaviana. Efa nataonareo avokoa ny alanenina rehetra (raha nisy) nefa mahery fisintona ny fahafatesana. Izao no lahatra ka afaka ho aiza moa! Tsara zara ny fahafatesana ka samy manana iray avy.
Mandalo tokoa izao fiainana izao, nefa raha mandalo izao fiainana izao, dia handalo toy izany koa ny varavaran-kazo izay hivoahany sy ny varavaram-bato hidirany, fa ao ny varavaran’ny Lanitra, hidirany ho ao amin’ny fiainana mandrakizay, ilay fiainana tsaratsara kokoa. Koa irinay izany teny izany, tompoko, ho balisama hanasitrana ny fery, ho lamba hamaoka ny ranomaso ka hitondra fiononana tanteraka ho anareo. Koa mahaiza mionona tompoko.
Vangiana: Eny, tompoko, mafy tokoa izao fahoriana mihatra aminay izao ka mila tsy ho zaka fa olombelona moa, nefa izao fanotronanareo manao tongotra miara-mamindra sy tanana miara-mandray ary fo miara-mitempo aminay izao, dia manamaivana ny fahoriana tokoa. Izao no tonga amin’ilay fitenenana hoe: «Ny hanin-jaray mora lany, ny entan-jaray mora zaka ary ny fahoriana iaraha-mitondra maivana. » Maivana ny fahoriana noho ny fanontronanareo. Faly ny fonay, tsy ny maty akory no mahafaly fa ny fahatsapanay fa tsy irery izahay amin’ny fitondrana ny fahoriana, koa misaotra anareo indrindra, tompoko.
Mpamangy: (miara-miteny): Aza misosoka alahelo intsony, tompoko.
Vangiana: (miara-mamaly): Misaotra indrindra, tompoko.
Mpamangy: Manaraka izany, araka ny fomban-drazana izay hita fa tsara ny hanohizantsika taranaka ankehitriny azy, dia manolotra variraiventy kely voarambin’ny tanana ho solon-dranombary tsy masaka ho an’ny velona sy singan-dandy hampombaina ny maty. Kely dia kely ny vitanay nefa manantena izahay fa tsy hijery tarehim-bola ianareo fa ny tarehim-pihavanana izay efa nampifamatotra antsika no jerenareo. Enga anie ka tsy ny ratsy toy izao intsony no hifanodiavantsika fa ny tsara indray amin’ny manaraka. Koa mahereza, tompoko.
Vangiana: Misaotra, tompoko, tsy nanadino ny soa nifanaovana. Ny teny mamy avy aminareo dia toy ny fanilo manazava ny aizim-pitom-pahoriana ; ka na manonja aza ny fahoriana dia maivana izany noho ny fampaherezana nataonareo, na mafaitra aza ny alahelo dia mamy aminay kosa ny teny fampanantenana avy amin’ny Soratra masina nambaranareo. Tsy nionona tamin’izany anefa ianareo fa mbola narahinareo vola aman-karena ihany koa, ho solon-dranombary tsy masaka ho an’ny velona sy ho singan-dandy hamatorana ny maty; heni-kaja ny velona ary ho tsara levenana ny maty, tompoko. Enga anie ny kitapo nialan’izao mba honeran’Andriamanitra avy zato heny, arivo tsy manam-pahataperana. Mamerina ny fisaorana, tompoko.
Raha ny marina, tompoko, tokony hiara-hipetrapetraka aminareo eto izahay hanala fahanginana, nefa noho ny adidy aman’andraikitra hafa izay tsy maintsy ho efaina, dia mangata-dalana aminareo hitsaitsaika, ny tenanay anefa no mety mandao fa ny Tompo Jesoa kosa tsy mba mandao anareo.
Vangiana: Tsy misy tsiny ny amin’izany, tompoko, fa omen-dalana ianareo. Ny eto adidy, ny any andraikitra, koa mahavità soa aman-tsara izay adidy mbola ho tanterahina. Misaotra tompoko.
Fanamarihana: Mifandimby mandray tanana ny vangiana ny mpamangy no sady mampahery azy ireo hoe: “Aza misoso-pahoriana intsony”, na “aza misosoka alahelo”, na “mahereza tompoko”. Dia valian’ny mana-manjo hoe: “Misaotra, tompoko”.
By Emy Team at 12 h 17